Akwụkwọ Mandeep Chahal na Martech Zone |
Edemede site na Mandeep Chahal
Mandeep Singh, onye guzobere SEO Discovery, ụlọ ọrụ na-ere ahịa dijitalụ bụ onye nwere ahụmahụ na-eme mkpọsa n'ọhịa SEO ahịa na ebe a na-ere ahịa dijitalụ.
Tọzdee, Febụwarị 4, 2021 Tọzdee, Febụwarị 4, 2021 Mandeep Chahal
Businessrụ ọrụ azụmahịa ọtụtụ ebe na-aga nke ọma dị mfe… kama ọ bụ naanị mgbe ị nwere atụmatụ ịzụ ahịa mpaghara dị mma! Taa, ụlọ ọrụ achụmnta ego na ụdị nwere ohere ịbawanye nnweta ha gafere ndị ahịa mpaghara site na ịme ntanye. Ọ bụrụ na ị bụ onye nwe ika ma ọ bụ onye azụmaahịa na United States (ma ọ bụ obodo ọ bụla ọzọ) nwere atụmatụ ziri ezi ị nwere ike ịbupụrụ ndị ahịa gị ngwaahịa na ọrụ gị n'ofe ụwa. Kere a multi-ọnọdụ azụmahịa dị ka a